Izincwadi ezihamba phambili zekhulu lama-XNUMX | Izincwadi Zamanje
Izincwadi ezihamba phambili zekhulu lama-XNUMX
U-Alberto Legs | | Amabhuku, Literatura
Kumakwe yiziqephu zomlando ezingachaza iminyaka eyinkulungwane yamanje, ikhulu lama-XNUMX kwaba ukuqhuma kwemisinga yezincwadi eyaxazululwa ngenkululeko yezindaba ezindala, ukutholakala kwezinhlobo ezintsha zokulandisa kanye nesikhathi esasakhiwe emakhasini ezinye zezinto ezinkulu kunazo zonke kudlala. Lokhu kukhethwa kwe- izincwadi ezihamba phambili zekhulu lama-XNUMX iba isibonelo esihle kunazo zonke.
1 Ulysses, kaJames Joyce
2 Ekufuneni Isikhathi Esilahlekile, nguMarcel Proust
3 The Grapes of Wrath, nguJohn Steinbeck
4 Idayari ka-Ana Frank
5 INkosana Encane, ngu-Antoine Saint-Exupéry
6 Lolita, nguVladimir Nabokov
7 Iminyaka Eyikhulu Yokuba Sodwa, nguGabriel García Márquez
8 Ngo-1984, nguGeorge Orwell
9 Ukubulala i-Mockingbird nguHarper Lee
10 UHarry Potter kanye Netshe lefilosofi nguJK Rowling
Ulysses, kaJames Joyce
Iphenduke ukucasulwa komgxeki okwahlukaniswa iminyaka, u-Ulysses kaJoyce ukhuluma ngekhulu, lesikhathi, labalingiswa abanobugebengu abahamba emigwaqweni yaseDublin befuna izimpendulo. Izindaba ze ULeopold Bloom noStephen Dedalus bangaba ngabombhali ofanayo ondaba yakhe yangaphakathi eveza ingxenye yalo msebenzi othatha igama layo kumuntu ophambili weHomer's Odyssey njengendlela yokuguqula izindaba ezingaphelelwa isikhathi nezikhathi ezintsha, ezazidinga eminye imibono. Kucatshangelwa abaningi njengoba incwadi enhle kakhulu ebhalwe ngesiNgisi ngekhulu lama-XNUMX, I-Ulises iholele esimeni samasiko esimweni semizila yezivakashi nemikhosi yonyaka eqhubeka nokuthuthukisa ifa lomsebenzi.
Ekufuneni Isikhathi Esilahlekile, nguMarcel Proust
Kwakhiwe ngu- izingxenye eziyisikhombisa ezibhalwe nguProust phakathi kuka-1908 no-1922 (abathathu kubo sebeshonile), Ku-Search of Lost Time kukhulunywa ngesikhathi, leso sikaMarcel, insizwa enokuzwela okukhulu efuna ukuba ngumbhali futhi isuke endleleni esungulwe ngokulandela amaqembu nobulili. Umbukiso ofaka izinkomba zokuqala zikakhonkolo ku- ubungqingili ezincwadini kanye nobufazi obuphakanyisiwe obunciphisa ubudoda kumqondo olula, obumba omunye wemisebenzi enethonya elikhulu ngekhulu lama-XNUMX.
The Grapes of Wrath, nguJohn Steinbeck
Owinile umklomelo we-pulitzer futhi umsebenzi ongachaza inkathi efana neThe Great Depression, The Grapes of Wrath, eyashicilelwa ngo-1939, ingenye ye imisebenzi emikhulu yezincwadi zaseMelika. Uhambo lomndeni wakwaJoad, oluphoqeleke ukuthi lusuke e-Oklahoma luye eCalifornia ngemuva kokubona umhlaba wabo udliwe, luphenduka isithombe sesikhathi esimakwe ukungalingani kwezomnotho kanye nokulindelwe okulindelekile ngekusasa. I-classic ephelele.
Idayari ka-Ana Frank
Zimbalwa izincwadi ezikwazile ukukhuluma iqiniso zisuka esihogweni uqobo; kakhulu ngentombazane eneminyaka eyishumi nantathu ubudala eyake yaphupha ngomhlaba ongcono. U-Anne Frank nomndeni wakhe, wonke amaJuda, wabaleka lapho amaNazi ayecashe ekamelweni eliphezulu lendlu endala yokugcina e-Amsterdam kusukela ngoJuni 12, 1942 kuya ku-Agasti 1, 1944, usuku abatholwa ngalo futhi bathunyelwa emakamu okuhlushwa. Isikhathi eside lapho uFrank osemncane abhala khona isimo sakhe, umbono wakhe womhlaba kanye nempilo okwakumele ayithole kudayari eyayizotakulwa nguyise, okuwukuphela kwakhe owasinda kule nhlekelele.
INkosana Encane, ngu-Antoine Saint-Exupéry
Umshayeli wezindiza nomlobi, uSaint-Exupéry wakhuthazeka ngokufika ehlane laseSahara ukuxoxa indaba yomshayeli wendiza ogijima kumfana onsundu oweqa kwi-asteroid esongelwa ubukhona bebaobabs. Uhambo olufushane kepha olunamandla lweNkosana eNcane lwasebenza ukufunda ngezingathekiso ezahlukahlukene zomhlaba ongaphelele kangako lapho leyo mpungushe eyayifuna ukufuywa noma usomabhizinisi obala izinkanyezi imele iqiniso eliqhubeka kuze kube namuhla. Akuphelelwa yisikhathi futhi kubalulekile kwabancane nabadala.
Lolita, nguVladimir Nabokov
Ngenkathi kushicilelwa indaba yokukhathazeka kothisha wendodakazi yakhe ayizalayo eneminyaka eyishumi nambili ngonyaka we-1955, umhlaba wathukuthela kakhulu kwathi abasebenza ngokuhlola izimpahla bashaya amakhala. Ngokuhamba kwesikhathi, wonke umuntu wayezobona ikhwalithi ye- umsebenzi odume kakhulu waseRussia Nabokov, isisekelo sokuqonda ukusebenza kwengqondo komphakathi lapho izindinganiso nezindinganiso zivame ukuvinjelwa isifiso esingaqondi ubudala noma ubudlelwano.
Iminyaka Eyikhulu Yokuba Sodwa, nguGabriel García Márquez
Phakathi nezinyanga eziyishumi nesishiyagalombili zobunzima nezinkinga zomnotho, uColombia uGabriel García Márquez wabhala eseMexico City incwadi ezoshintsha izincwadi zaseLatin American ingunaphakade. Ishicilelwe ngo-1967, Iminyaka Eyikhulu Yokuhlala Yedwa inoveli ethonya kunazo zonke yaseSpain yekhulu lama-XNUMX hhayi kuphela ukuqinisekisa ukudunulwa kwe- I-Latin American boom yama-60s kanye neqiniso lomlingo ekhona ezitaladini nakubalingiswa balelo dolobha elilahlekile laseMacondo, kepha okokuqandisa umlando wezwekazi lonke phakathi kwamakhasi alo ingunaphakade.
Ngo-1984, nguGeorge Orwell
Isibuko Esimnyama, Indaba Yencekukazi ... umabhebhana Kungene ezimpilweni zethu ngesimo samafilimu, uchungechunge nezincwadi ezikweleta ingxenye yezithombe zazo kuya ku-1984, inoveli kaGeorge Orwell eyashicilelwa eminyakeni embalwa ngemuva kweMpi Yezwe II lapho umhlaba waqala ukucabanga kabusha ngezizathu zamashwa awo nemiphumela yabo. Setha eNgilandi yesikhathi esizayo lapho ubhuti omkhulu ilawula izimpilo zabo bonke abahlali bayo, umqondo wango-1984 usethusa njengoba kunengqondo uma sihlaziya inkambo yezikhathi zamanje lapho kuqala khona ukulawula ngomakhalekhukhwini olula.
Ukubulala i-Mockingbird nguHarper Lee
Iphenduke i- inoveli efundwa kakhulu ngobandlululo lwekhulu lama-XNUMXUkubulala i-Mockingbird nguHarper Lee, eyanyatheliswa ngo-1960, kuyincwadi yakudala eye yakwazi ukuqonda umlando wezinhlanga zase-United States ongaxazululwa ngokuphelele. Ngamehlo kababa wakhe, u-Atticus Finch, umbalisi womdlalo nomvikeli womuntu omnyama osolwa ngokudlwengula owesifazane omhlophe ngesikhathi Sokuwohloka Okukhulu Kwezomnotho, iScout Finch esencane iba alter ego Umbhali ojwayele leli qiniso inqobo nje uma ekhumbula. Ngo-2015, ingxenye yesibili eyabhalwa ngaphambi kokubulala iMockingbird uqobo, yashicilelwa ngaphansi kwegama le- Hamba uthumele umlindi.
UHarry Potter kanye Netshe lefilosofi nguJK Rowling
Zimbalwa, noma mhlawumbe azikho, izenzakalo zokubhala ezingalinganiswa ngokuqhathaniswa nalokho okubangelwe yi- isaga lomfana oyisangoma uHarry Potter nokuzidela kwakhe eHogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Umsebenzi wokuqala, owashicilelwa ngo-1997 ususelwa embhalweni wesandla womama osemncane ohlukanisile futhi ongasebenzi, uHarry Potter kanye neFilosofi's Stone, waba yi-quintessential boom boom engaholela kwezinye izincwadi eziyisithupha (kungabalwa uHarry Potter nefa elilahliwe) inani lalo lonke wakhuphukela ku- $ 15 billion ngo-2007.
Ngokubona kwakho, yiziphi izincwadi ezihamba phambili zekhulu lama-XNUMX?
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Izincwadi ezihamba phambili zekhulu lama-XNUMX
ULuis Portalanza kusho
Akuyona into ebucayi, - njengoba ihlazo lomunye umuntu lishukumisa-, futhi liyasihlekisa, bafundi; "umhlaziyi wezincwadi," obala izincwadi ezinhle kakhulu ze-S20; Lokho kufaka ukukhwabanisa njengoba kubhekwa ohlwini lwama-premium lwezincwadi zesintu, ukukhwabanisa kwalokho abakubiza ngokuthi "idayari ka-Anne Frank", inkohliso esungulwe izikhathi eziyikhulu ngokungenakuphikiswa. Akunakho ukufaneleka ukukukhombisa "njengebhuku" noma njengomsebenzi wezincwadi ngoba akunanani lemibhalo. Lo "msebenzi" ubukela phansi kuphela inani elingangabazeki labanye okukhulunyiwe futhi uwenza kabi ngokuwuqhathanisa nalawo abhalwe abanye ababhali beqiniso "izinkomo ezingcwele" ngemigomo ebhaliwe.
Phendula uLuis Portalanza
INkosi Byron. Isikhumbuzo sokuzalwa kwakhe. 4 zezinkondlo zakhe.
Izincwadi ezinhle kakhulu zika-Isabel Allende